Iapile inokuguqula iibhetri ukuba yenze mandundu ukusebenza kwazo | Iindaba zeGajethi
Ukuba awunayo imodeli ye-iPhone Plus, unokuziva uchongiwe nesihloko sale nqaku, kwaye kukuba ukuzimela kwezixhobo zenkampani yeCupertino, nditsho nezona zintsha kakhulu ezinje nge-iPhone 7 kunye ne-iPhone 8, zibonelela ngenani lokuzimela elingashiyi mntu wanelisekile.
Olunye udaba lwamva nje malunga nokusebenza okuphuculweyo ngokutshintsha kwebhetri kungena ngaphakathi UReddit, kwaye akukho bambalwa abasebenzisi ababonisa ukuba inokuba yinyani. Masibone ngokusondeleyo ngakumbi ukuba yintoni ingxaki ngebhetri ye-iPhone kwaye ukuba isonjululwe nyani ngokufaka endaweni engekho mthethweni.
Elona bali libalulekileyo kukuba ezinye iifowuni ezinje nge-iPhone 6 okanye i-iPhone 6s zifumana iziphumo ezingaqhelekanga kwiiBenchmarks. Ngokusekwe kwibhetri etshintshiweyo, aba basebenzisi bathi ibhetri entsha kwi-iPhone yabo iphucula iziphumo kunye nokusebenza kwayo yonke ifowuni. Ngaphandle koku, ayisiyiyo okokuqala ukuba sifumane "isiphumo se-placebo" kolu hlobo lokuziqhelanisa, ke kuya kufuneka sithathe ulwazi nge-tweezers entle kakhulu.
Ngokucacileyo, inkqubo yolawulo lweprosesa yokubonelela ngeziphumo ezingcono zezinto ngamanye amaxesha ezenza ukuba ifowuni icothe. Kakhulu kangangokuba abo baqala nje ukufaka ezi bhetri bafumanisa ukuba ukusebenza kuyaphucuka. Yinto efana nokuba indlela yokonga umbane isebenza rhoqo. Nangona kunjalo, Aba balandi idangatye elinokuthi iApple inyanzelise ukusebenza kakubi kwiifowuni ezindala, isenzo sokuzithandela esiza kubeka abasebenzisi kwihlabathi liphela kwisimo esibi. Ayizondaba zokuqala malunga noku, uluntu lwetekhnoloji luneliso elinye kwaye siza kuhlaziya ulwazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Apple inokuthi iguqule iibhetri zenze mandundu ukusebenza kwazo